Puntland oo laga bilaabay ololaha maalmaha caafimaadka carruurta, hawlgalkaasi oo socon doono muddo 7 cisho ah. – Radio Daljir
Garowe, March, 11 ? Waxaa maantay si rasmi ah gobollada Puntland ugu furmay ololaha maal-maha caafimaadka carruurta, kaasi oo sanadkiiba 2 goor laga hirgaliyo gobollada Puntland.
Munaasabadii ugu ballaarnayd ee furitaanka ololaha caafimaadka carruurta ayaa lagu qabtay magaalada Garowe, waxaana kasoo qayb-qaatay M/kuxiggeenka Puntland General C/samad Cali Shire, xubno ka kala socday golaha xukuumadda iyo golaha wakiillada Puntland, aqoon-yahanno, saraakiil ka socotay hay?adaha UNICEF, W.H.O iyo dhammaan hay?adaha ka shaqeeyaha arrimaha caafimaadka.
Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Puntland C/risaaq Xirsi Xassan oo ka hadlay furitaankii munaasabadaasi ayaa sheegay in olelahaan laga hirgalin-doono 8-da gobol ee Puntland iyo 34 degmo oo ay ka mid-yihiin degmooyinka iyo tuulooyinka ku yaala meelaha ka baxsan laamiga.
Agaasimaha ayaa tilmaamay in hadafka wasaaradda caafimaadka Punland uu yahay in ololahaan ay ka faa?iidaystaan 170937 ka mid ah carruurta ka yar 5-ta sano iyo 213671 ka mid ah hooyooyinka dhaqmaadka ah. Waxaana agaasimuhu hadalkiisa raaciyay in cudurada la tallaalayo ay ka mid yihiin 6-da cudur ee dilaaga ah sida Qaaxada, Dabaysha, Qiixdheerta, Teetannada, iyo Gawracatada.
Madaxa hay?adda W.H.O u qaabilsan Puntland Dr Shiikh Cali oo ka hadlay munaasabada ayaa sheegay in qorshaha hay?adiisu ay tahay in 100%85 carruurta iyo dumarka dhaqamaadka ah ololahaan looga faa?iideeyo.
Wasiirka caafimaadka Puntland Dr Cali Cabdi Warsame oo ka hadlay munaasabada ayaa sheegay inay qorshaha wasaaradda caafimaadka Puntland sanadka 2012 uu yahay sidii xarumo caafimaad ay ugu hirgalin-lahaayeen dhammaan degmooyinka iyo toolooyinka Puntland, waxaana uu xusay in 24-ta bishaan March ay xarumaha TP-da ay ka yag-leeli-doonaan degmooyinka Taleex, Eyl, iyo degmada Jarriiban ee gobolka Mudug.
Ugu dambayntii munaasabadaasi daah-furka olelaha maal-maha caafimaadka carruurta ayaa waxaa soo xiray M/kuxiggeenka Puntland General: C/samad Cali Shire waxaana uu walaac-xoogan ka muujiyay fahanka bulshada ku dhaqan Puntland ee Talaalka oo wali aad u liita, isagoo dhinaca kale bulshada ugu baaqay inay si wanaagsan ugu faa?iidaystaan tallaalkaan lacag la?aanta ah ee ay fidinayso wasaaradda caafimaadka Puntland oo kaashanaysa hay?adaha W.H.O iyo UNICEF.
Waa Ololihii 8-aad oo la xiriira tallaalka carruurta iyo hooyada oo laga hirgaliyo gobollada Puntland, waxaana ololahaan uu uga duwan-yahay kuwii hore in dhulka miyiga ah la gaarsiinayo tallaalka caruurta iyo hooyada, halka waqtiyadii hore uu ku ekaa magaalooyinka oo qura.